သုခုမနန်းတော်: ရောက်သွားခဲ့ တဲ့ဆိုင်လေး
ရေးသားသူ သုခုမလေဒီ 16 December 2008 အမျိုးအစား ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာ
ဒီနှစ် ဒီဇင်ဘာကတော့ မချမ်းအေးလှပါဘူး။ ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာပြီ ဆိုတာ ဟုတ်မယ်ထင်တယ်။ အအေးဆုံးလလို့ သတ်မှတ်ကြတဲ့ ဒီဇင်ဘာလတောင် မအေးတော့ဘူး ဆိုတော့...။
သို့ပေမယ့်လည်း ဒီဇင်ဘာလဖြစ်တဲ့ သည်လမှာ ထိုင်ဝမ်က အမ ပြန်ရောက်လာတာရယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၇နှစ် လောက်ကအမေရိကကို ထွက်သွားတဲ့ အမ တစ်ယောက်နဲ့ သူ့သမီးလေး ပြန်လာတာရယ် က ကျွန်မအဖို့ ၀မ်းသာစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ သူ့သမီးလေးဆိုရင် ကျွန်မတို့ လက်ထဲမှာပဲ ကြီးပြင်းခဲ့တာပါ။ သူတို့သားအမိနဲ့တော့ တစ်ခေါက် သာတွေ့ ပြီးပေမယ့်၊ ထိုင်ဝမ်က အမနဲ့တော့ နေ့ တိုင်းလိုလို ပဲ အတူသွား၊ အတူစားပေါ့။ ညတိုင်းလည်း တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး အပြင်ထွက်စားကြတယ်။ အမလာမှပဲ ကျွန်မလည်း အိမ်ထဲမှာ အိမ်တွင်းပုန်း လုပ်နေလို့ မရတော့တာလေ။
ရန်ကုန်မှာလည်း စားသောက်ဆိုင်တွေက ပေါပါတယ် ဆိုပေမယ့် တကယ် တမ်းတစ်နေ့ တစ်နေ့ ဘယ်သွားလို့သွားရမှန်း မသိအောင်ဖြစ်တော့တာပဲလေ။ အစားအသောက်ကောင်းပေမယ့် နေရာထိုင်ခင်း မကောင်းတာ နဲ့ နေရာထိုင်ခင်း ကောင်းပေမယ့် အစားအသောက် သိပ်မကောင်းတာ နဲ့ ဆိုတော့ တစ်ခါတစ်ခါ သွားစားဖို့အရေး အတော်စဉ်းစားရပါတယ်။ များသောအားဖြင့် အသားကင်ဆိုင်တွေ ချည်းပါပဲ။ ယိုးဒယား ဆိုင်တွေလည်းများပါတယ်။ ပူပူ စပ်စပ် တွေပေါ့။ ကြာတော့လည်း ဒါတွေ ကိုချည်း စားရပြန်တော့ မစားချင်ကြတော့ပြန်ဘူးလေ။ လူ့ အလိုနတ်မလိုက် နိုင်ဆိုသလိုပေါ့။ အဲဒီတော့ တွေး...၊ ခေါင်းပူအောင်စဉ်းစား.. ဘယ်သွားမလဲ ?? ဘာစားမလဲ?? ပေါ့။
့ဒီနေ့လည်း ဘယ်သွားရမယ်မှန်း မသိတာကြောင့် စဉ်းစားမရဖြစ်နေတုန်း၊ MRTV-4 ထဲမှာ ကြော်ငြာတဲ့ ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကို အမေက ညွှန်ပါတယ်။ 24 hours လည်းဖွင့်တယ်ပေါ့။ အစားမျိုးစုံလည်း ရတယ်တဲ့ ။ ဒါနဲ့ အဲဒီနေရာကိုပဲ ဦးတည်ဖြစ်တယ်။ သမတရုပ်ရှင်ရုံ အနီး ၊ သမတဟိုတယ် နဲ့ ကပ်လျှက်ဖွင့်ထားတဲ့365 ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေးပါ။ ဆိုင်လေး က အပြင် အဆင်လေး လည်း ကောင်းပါတယ်။ ထိုင်ခုံတစ်ချို့ ကလည်း တော်တော် ခန်းနား တယ်။ ချစ်စရာကောင်းပြီး ထိုင်လို့ ကောင်းသလို၊ အစားသောက် ကလည်း အတော် စားလို။ ဈေးနည်းနည်းလေးများတယ် ဆိုပေမယ့်အစားကောင်းတော့လည်း တန်တယ်လို့ ဆိုရမှာပေါ့။ ကျွန်မတို့ စားချင်ကြတဲ့ကိုးရီးယား ကင်ချီထမင်း၊ ဂျပန် ရေညှိ ထမင်းလိပ်(ဆူရှီ) နဲ့ တရုပ်ဟင်းမျိုးစုံ လည်းရတယ်ဆိုတော့ ကိုယ်စားချင် တာတွေကိုမှာ စားနိုင်တယ်လေ။ နောက်ပြီး coffee ၊ cold drink မျိုးစုံလည်း ရပါတယ်။ ဆိုင်ကိုကြော်ငြာပေးသလိုများ ဖြစ်နေပြီလားမသိဘူး။း)း) ကြော်ငြာခရလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ချစ်စရာကောင်းပြီး အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်လို့ ကောင်းတဲ့ နေရာလေးမို့ ပါ။
သူငယ်ချင်းတွေ လာရင်လည်း အဲဒီဆိုင်လေးကို သွားထိုင်အုံးမယ်လို့ စိတ်ကူးတာပါပဲ။နောက်တစ်ခါ အမပြန်လာရင်လည်း သွားဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ သည်ဆိုင်လေး နောက်တစ်ခေါက် အမ ပြန်လာတဲ့ အထိရှိနေပါအုံးမလားတော့ မသိဘူးလေ။
(24 hours ဖွင့်လို့ 365 လို့ နာမည်ပေးတာလားမသိပါဘူး။ တစ်နှစ်မှာ 365 ရက် ရှိတာဆိုတော့...
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ တိုက်နံပါတ် လို့ ပြောတာပဲ ။ သေချာတော့မသိဘူးး)) )
ကျွန်တော်လည်း ရောက်ခဲ့တယ်၊ ကောင်းတယ်၊ အဆင်ပြေတယ်